MR MRT: ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအပေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်
“ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချထားသော ကလေးငယ်အလောင်းပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်” သတင်းကို ဖတ်ပြီး အံ့သြတုန်လှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆက်ပြီး စဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရ ဘ၀တစ်ခုဟာ ပဋိသန္ဓေက စပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ ၀မ်းထဲမှာ သန္ဓေသားအဖြစ် မပီပြင်သေးခင် ကလလရေကြည်တည်ကတည်းက ဘ၀တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ ပါဏာတိပါတကံထိုက်ပါတယ်။ အဖျက်ခံရတဲ့ ကိုယ်ဝန်က လူ့ကိုယ်ဝန် ဖြစ်နေရင်တော့ ဘာသာရေးအရ လူသတ်မှုပေါ့။
ပါဏာတိပါတကံရဲ့ အလေးအပေါ့ကို ဘာသာရေးအရ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အသတ်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါရဲ့ အရည်အချင်း နဲ့ အရေအတွက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။ အရည်အချင်းဆိုတာ သီလ သမာဓိ ပညာစတဲ့ ဂုဏ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်ဆိုတာကတော့ ခန္ဓာကိုယ် အကြီးအသေး ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥပမာ သီလရှိတဲ့သူကို သတ်တာက သီလမရှိတဲ့သူကို သတ်တာထက် ပိုပြီး အပြစ်ကြီးပါတယ်။ ကျေးဇူးကြီးတဲ့သူကို သတ်တာက ကျေးဇူးမကြီးတဲ့သူကို သတ်တာထက် ပိုပြီး အပြစ်ကြီးပါတယ်။ လောကမှာ သီလ သမာဓိ ပညာ အစင်ကြယ်ဆုံး အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်တွေကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးကြီးမားလှတဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကို အပြစ်အကြီးဆုံးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ သေရင် မုချ အပါယ်လားရမယ့် အနန္တရိယကံ (ပဉ္စာနန္တရိယကံမှာပါဝင်)လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အရေအတွက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ထင်ရှားအောင် တိရစ္ဆာန်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း ဥပမာနဲ့ ရှင်းပြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဆင်ကိုသတ်တာက ခြင်ကိုသတ်တာထက် ပိုပြီး အပြစ်ကြီးပါတယ်။ အသတ်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အကြီးအသေးပေါ် မူတည်ပြီး အင်အားစိုက်ထုတ်မှု စေတနာစိုက်ထုတ်မှု ကွာခြားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့သတ္တ၀ါကို သတ်တဲ့အခါမှာ အားစိုက်ထုတ်မှု ကြီးမားတဲ့အတွက် အပြစ်ကြီးလေးပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ သတ္တ၀ါကို သတ်ဖြတ်တာက အားစိုက်ထုတ်မှု နည်းတဲ့အတွက် အပြစ်ပေါ့ပါတယ်။ ဒီရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သန္ဓေသားကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ အရွယ်ရောက်တဲ့လူကို သတ်တာလောက် အပြစ်မကြီးပါဘူး။ သန္ဓေသားရဲ့ အရည်အသွေးရော အရည်အချင်းပါ သေးငယ်နိမ့်ကျနေသေးလို့ သတ်ရတာလည်း (အရွယ်ရောက်သူကို သတ်ရတာနဲ့စာရင်) လွယ်ကူလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုထောင့်က မြင်ရတဲ့ အပြစ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကပြစ်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေ (ရှိခဲ့ရင်)နဲ့အညီ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အပြစ်ကြီးကြီးသေးသေး သတ်ဖြတ်မှုမှန်သမျှကို ဗုဒ္ဓဘာသာက ရှုတ်ချပါတယ်။ ပါဏာတိပါတသိက္ခာပုဒ်နဲ့ တားမြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီကိစ္စကို အားပေးအားမြှောက် မလုပ်သင့်တာ ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသားလွတ် ရှုတ်ချတာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်း ဆိုတာမျိုး မလွဲသာလို့ လုပ်လိုက်ရတာ မဟုတ်လား။ ရှုတ်ချတာထက် မေတ္တာ ကရုဏာစတဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်တွေကို ကျင့်သုံးပြီး ဒီလိုကိစ္စ ဖြစ်လာအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုတင်ကာကွယ်တာက ပိုပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာ မွေးလာမယ့်ကလေးကို မယူချင်လို့ အခြေအနေအရ မယူနိုင်လို့ ဖြစ်ရတာပါ။ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကို ဒီနေ့ခေတ်မှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ပညာပေးခြင်း၊ သွန်သင်ဆုံးမခြင်း။ မိခင်က မလိုချင်တဲ့ ကလေးငယ်ကို အသတ်မခံရအောင် သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ အကာအကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကလေးမွေးစားမှုဓလေ့ ထွန်းကားစေခြင်း။
Posted by Ashin Acara. at 7:27 PM
Labels: 01C. Articles - ဆောင်းပါးများ
Khin September 22, 2011 at 2:22 AM
Indians and Chinese customs and selfishness of their own race and names and economy make female babies got aborted.